Arsenal oo Manchester United iyo Chelsea kaga horreysa loollanka loogu jiro mid ka mid ah gooldhaliyeyaasha ugu wanaagsan Yurub – Gool FM
(London) 30 Maajo 2020. Kooxda Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay la xiriirtay wakiilka weeraryahanka kooxda Lyon ee Moussa Dembele si ay ugala soo wareegaan xagaagan weeraryahanka halista badan.
23-sano jirkan ayaa lala xariirinayaa kooxo badan oo yurub ka dhisan kaddib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu ku qaadanayo kooxda reer France, iyadoo Manchester United, Chelsea iyo Liverpool ay dhamaantood xiiseynayaan adeega laacibkan.
Arsenal ayaa lagu qasbi karaa inay iska iibiso kabtankeeda Pierre-Emerick Aubameyang xagaagan hadii ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Gabon uusan la galin heshiis cusub, sidaas darteed waxay Gunners kusoo biirtay dagaalka loogu jiro Dembele.
Sida laga soo xigtay L’Equipe, kooxda Mikel Arteta ayaa la xiriirtay wakiillo matalaya ciyaaryahanka si ay kaga la hadlaan suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqi karo London.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Lyon ay ku qiimeysa laacibkeeda lacag dhan 60 milyan ginni, isla markaana Arsenal ayaa u weecatay dhanka heshiisyada isku bedelka iyo inay si xor ah kula soo saxiixato sabab la xiriirta saameynta dhaqaale ee cudurka Coronavirus.
Dembele ayaa dhaliyay 22 u gool tartamada oo dhan kooxda Lyon intii lagu jiray ololihii xilli ciyaareedkii 2019-20, iyadoo horyaalka kubbada cagta ee dalka Faransiiska la soo gabagabeeyay horaantii bisha kaddib faafitaankii caabuqa COVID 19 oo si adag u aafeeyay dalkaas.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigan ayaa kooxda Lyon ku soo biiray sanadkii 2018-kii isago kaga soo dhaqaaqay naadiga Celtic, wuxuna kooxda u saftay 60-kulan tan iyo markaas, isagoo u dhaliyay 31-gool.